ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေ velcom ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ချိန်ခွင်လျှာကိုရှာဖွေ velcom ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
120 ကင်စိန်ခေါ်မှု * ကြိုးစားပါ။ ဒါဟာငါ့ကိုပြသထားတယ်။
ချိန်ခွင်လျှာ Check ပဲ * ဖုန်းကုဒ်နံပါတ် # 100 ရိုက်နှင့်ခေါ်ဆိုခ button ကိုနှိပ်, အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
သင်တစ်ဦးသည်လစဉ်ကြေးနဲ့ဒေတာအစီအစဉ်ရှိပါကသင်သည် * 100 * 1 # နှင့်ဖုန်းခေါ် key ကို dial ဖို့လိုတယ်, အဖြေသည်သင်၏အသွားအလာချိန်ခွင်လျှာနဲ့ (အခွန်အစီအစဉ်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်တစ်ဦးချင်းစီအထုပ်အောက်မှာပေးထားတဲ့) ကိုကျန်ရှိသောမှအဖြေအတွက်လာပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအကောက်အခွန်စီမံကိန်းများ၏အကွာအဝေးရှိပါကမင်္ဂလာပါ * # 120 dial, သင်သည်အခြားအကောင့်များနှင့်ဆုကြေးငွေရှိပါကယင်းဆုကြေးငွေအကောင့် 120 စစ်ဆေးဆုကြေးငွေအကောင့် 1 စစ်ဆေး * 1 * 120 # dial နှင့် *2*2# ။
20 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,488 စက္ကန့်ကျော် Generate ။